सिल्टलले सर्वश्रेष्ठ वेब पेज स्क्रैपरलाई विचार गर्न सुझाव दिन्छ
सेलेनियम वेब अनुप्रयोगहरुको लागी एक खुल्ला स्रोत स्वत: परीक्षण सूट छ जुन फरक मा प्रयोग गरिन्छ प्लेटफर्महरू र ब्राउजरहरू. सेलेनियमले W3C WebDriver विनिर्देशको लागि पूर्वाधार प्रदान गर्दछ, एक प्रोग्रामिंग इन्टरफेस जुन वेब ब्राउजरसँग उपयुक्त छ. यो सफ्टवेयरले विभिन्न ब्राउजरहरू र उपकरणहरू समावेश गर्दछ जुन वेब ब्राउजर स्वचालन सक्षम गर्दछ.
किन सेलेनियम सफ्टवेयर?
सेलेनियम सफ्टवेयर वेब पेजबाट डाटा निकाल्न वेबमा आधारित स्वचालित अनुप्रयोगमा फोकस गर्दछ. यो सफ्टवेयर तपाईंको वेब स्क्रैपिंग विशिष्टताहरू पूरा गर्न डिजाइन गरिएको सफ्टवेयरको सुइट समावेश गर्दछ - hospedagem gratis via ftp. सेलेनियमको सफ्टवेयरमा चारवटा मुख्य घटक छन्.
सेलेनियम WebDriver को एक सरल प्रोग्रामिंग इंटरफेस को पेशकश को लागि डिजाइन गरिएको थियो. यदि तपाइँ गतिशील वेब पेज स्क्रैप गर्न काम गर्दै हुनुहुन्छ भने, सेलेनियम-वेबड्राइभर विचार गर्नको लागि भाग हो. यो उपकरणले वेब पृष्ठहरूमा वेब डाटा निष्कर्षणलाई समर्थन गर्दछ जहाँ सामग्री पृष्ठ पुन: लोड नगरी परिवर्तन गर्न सक्दछ.
WebDriver ले एक वस्तु-आधारित एप्लिकेसन प्रोग्रामिंग इन्टरफेस (API) को आपूर्ति गर्दछ जुन वेब परीक्षण र स्क्रैपिंग को लागि उन्नत समर्थन प्रदान गर्दछ।. उपकरणले स्वचालनको लागि समग्र समर्थन प्रयोग गरी ब्राउजरमा कल गरेर काम गर्दछ.
सेलेनियम ग्रिड लाई एक देखि अधिक वर्चुअल मिसिन मा टेक्स्ट को वितरण मा व्यापक रूप देखि प्रयोग गरिन्छ।. सरल शब्दहरूमा, सेलेनियम ग्रिडले तपाइँले विभिन्न वर्चुअल मिसिनहरूमा एक भन्दा बढी ब्राउजरको विरुद्धमा आफ्नो परीक्षणहरू चलाउन सक्षम गर्दछ. ग्रिडले तपाईंलाई वितरित निष्पादन वातावरणमा स्क्रैपिंग चलाउन अनुमति दिन्छ.
वेब स्क्रैपिंगको लागी समय एक महत्वपूर्ण कारक हो. गतिशील वेब पेज स्क्रैप गर्न यो कहिल्यै सजिलो छैन. यस कार्यलाई तपाईंको कार्य कार्यान्वयनमा छिटो गरेर स्क्रैप गर्नुहोस्. तपाईं धेरै परीक्षणहरू एकै समयमा चलाएर यो गर्न सक्नुहुनेछ. सेलेनियम प्रयोग गर्ने बारे सबै भन्दा राम्रो कुरा यो तथ्य हो जुन तपाईं ब्राउजर, संस्करण, र प्रकारको ग्रिड सञ्चालन गर्न सक्नुहुन्छ.
सेलेनियम रिमोट कंट्रोल (आर सी)
के तपाईं जाभास्क्रिप्ट सक्षम ब्राउजर स्क्रैपिंग मा काम गर्दै हुनुहुन्छ? सेलेनियम रिमोट कंट्रोल विचार गर्ने उपकरण हो. यो उपकरणले तपाईंलाई आफ्नो मनपर्ने प्रोग्रामिङ भाषामा स्वचालित अनुप्रयोग परीक्षणहरू लेख्न अनुमति दिन्छ. सेलेनियम एकीकृत विकास पर्यावरण (आईडीई)
सेलेनियम IDE एक लिपि हो जुन फायरफक्स एक्सटेन्सनको रूपमा काम गर्दछ जुन डेटा सम्पादन गर्न, रेकर्ड र डिबग गर्न अनुमति दिन्छ।. सुरुवातका लागि, सेलेनियम IDE रेकर्ड र प्लेलिस्ट फायरफक्स ब्राउजरको साथ अन्त-प्रयोगकर्ता कुराकानी.
सेलेनियम सफ्टवेयर दुवै पाइजोन2र पाइजन3सँग मिल्दो छ. यदि तपाइँ इन्टरनेट एक्सप्लोरर चालक संकलन गर्दै काम गर्दै हुनुहुन्छ भने, तपाईंलाई 32 र 64-बिट क्रस-कम्मिलर र भिजुअल स्टुडियो 2008 चाहिन्छ. रूबी2सँग चिन्ता एक थप फाइदा हो.
संग वेब पेजहरु स्क्रैपिंग सेलेनियम संग, तपाईं कुशलतापूर्वक जाभास्क्रिप्ट वेब रूपहरु संग बातचीत गर्न सक्छन्. तपाईंको मेसिनमा एक वेब डाइभर स्थापना गर्नुहोस् र XPath प्रयोग गरेर फारम पत्ता लगाउनुहोस्. सेलेनियम प्रयोग गरेर, ड्रप-डाउन मेनुमा क्लिक गरेर आफ्नो मनपर्ने विकल्प चयन गर्नुहोस् र अर्को तत्वमा क्लिक गर्नुभन्दा पहिले तपाईको ब्राउजर केही मिनेट लिन सक्नुहुनेछ।.
तपाईंको लक्षित पृष्ठले स्क्रैप गरिएको डेटा प्रदर्शन गरेपछि सबै फारामहरू सही रूपमा भरिएको छ. केही वेब पृष्ठहरू सामग्री लोड गर्नु अघि समय लाग्छ. यस प्रकारको पृष्ठ स्क्रैप गर्न, तपाईंको ड्रप-डाउन विकल्पहरू मार्फत लुप गर्नुहोस्, जुन विशिष्ट वेब ढाँचाहरू समावेश छन्. यो नोट गर्न महत्त्वपूर्ण छ कि सेलेनियम सफ्टवेयर विन्डोज अपरेटिङ सिस्टम, म्याक ओएस, र लिनक्ससँग मिल्दो छ. सेलेनियम सफ्टवेयरको साथ तपाईंको वेब (4 9) पृष्ठ स्क्रैपिंग मेट्नुहोस्.